रंगीन जापान 47 प्रशासनिक एकाइहरु (प्रान्त) मा विभाजित छ, र तिनीहरूलाई प्रत्येक, होक्काइडो लागि बाहेक, यस prefect नियन्त्रित छ। तिनीहरूले एक धनी इतिहास र एक रोचक संस्कृति, विभिन्न परम्परा र चलन छ। धेरै पर्यटकहरु, मूल क्षेत्र आकर्षित छन् ठाँउहरु भरिएको र 京都 府 (क्योटो) को रूपमा चिनिन्छ।
को केन्द्र मा Honshu को द्वीप पहाड दायरा Tamba bisects जो प्रान्त छ। एक हजार वर्ष पहिले, यहाँ देशको राजधानी यहाँ थियो सम्पन्न बन्दोबस्त लागि सम्राट को निवास, र सबै रचनात्मक मान्छे को कुशल हात सारियो आवश्यक छ। राज्य को मुख्य शहर सबैभन्दा प्रसिद्ध वास् र कलाकारहरूको संचालित मा, त्यो जापान मा आफ्नो स्थायी निवास प्रसिद्ध तथ्याङ्कले रूपमा निर्वाचित गरिएको थियो। थप एक सय शताब्दीपछि भन्दा, सम्म राजधानी टोकियो हस्तान्तरण छैन, क्योटो शहर देश को सांस्कृतिक र राजनीतिक जीवनको केन्द्र थियो।
6 जिल्लामा र 15 बस्तियों समावेश जो प्रान्त, 4.6 हजार। किमी2फैलिएको र बासिन्दा संख्या नाघ्यो 25 लाख। प्रशासनिक एकाइ को northernmost बिन्दु जापान ट्याङ्गो प्रायद्वीप समुद्र देखिएको छ।
Yamashiro उपत्यका, Maizuru खाडी तट, पहाड दायरा र क्योटो Tamba पूल: यसको क्षेत्र चार भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। प्रान्त, मुख्य पर्यटक केन्द्र को एक, संसारको विभिन्न भागहरु यूनेस्को को सुरक्षा अन्तर्गत छन् 17 जो असामान्य आकर्षण, द्वारा आकर्षित देखि यात्री को एक विशाल संख्या आकर्षित गर्छ।
जलवायु र मौसम
कारण हिमालहरू गर्न, चिसो हावा, को प्रान्त को न्यानो जलवायु को प्रवेश रोकन, तट मा भिजेको छ। मौसम को Tsushima वर्तमान असर गर्छ। हिउँदमा यो शून्य वरिपरि hovering छ जबकि औसत गर्मी तापमान, वरिपरि 30 डिग्री छ। वसन्त वा गिरावट - पर्यटकहरु जुन देखि सेप्टेम्बर भारी वर्षा हो कि, त्यसैले सबै भन्दा राम्रो समय भ्रमण गर्न सम्झनुपर्छ।
आकर्षित पर्यटकहरु प्रान्त
पर्यटक सबै विभाग लागि असीमित मनोरञ्जन क्योटो प्रदान गर्दछ। प्रान्त सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्मारक, सुन्दर दृश्यहरु र खुसीसाथ को यूरोप अभिवादन को स्थानीय को आतिथ्य यसको विशाल नम्बर लागि प्रसिद्ध छ। हालै, हाम्रो compatriots एकदम अक्सर तपाईं स्थानीय भन्सार थाह प्राप्त गर्न सक्छन् जहाँ यसको मनोरञ्जन जापानी रिसोर्ट्स, रोजेका।
क्योटो - जापान पूर्व राजधानी
निस्सन्देह, सबै भन्दा लोकप्रिय शहर क्योटो, जापानी कला, वास्तुकला र धर्म को सबै भन्दा राम्रो उपलब्धि को एक खजाना trove भएको छ जो एक प्रान्त हो। यो जादुई कुनामा, तपाईं पुरानो जापान थाह प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यहाँ प्राचीन मन्दिर र संग्रहालयहरु को एक ठूलो संख्या हजार बारेमा दुई हो, बाँकी पनि एक हप्ता असम्भव छ भनेर विचार गर्नुहोस्। प्रतिष्ठित स्मारक धेरै दर्जन अनुमानित छन्, र तिनीहरूले अविश्वसनीय क्योटो प्रान्त गर्व छन्।
जो आफ्नो अचम्मको सौन्दर्य, शहर को केन्द्रीय भाग स्थित, र प्राचीन मन्दिर को हरेक एक को तस्वीर प्रसारित आकर्षण, एउटा वास्तविक धन छ।
एक जापानको पूर्व राजधानी को दिल मा स्थित सबै भन्दा सुन्दर वास्तुकला परिसर को। Nijo महल - दुई छल्ले एक पानी भरिएको खाई, र बलियो पर्खाल सहित fortifications, को हुन्छन् जो वर्तमान Fortification छ। Ninomaru दरबार र Citadel Honmaru - को गढ मा ब्याज को दुई अंक छन्।
अद्वितीय पर्खाल चित्रहरु प्रशंसा पर्यटकहरु हजारौं आकर्षित क्लासिक जापानी शैली सजाया वास्तु कला यी masterpieces,, धेरै कोठा, चित्र जो कडाई निषेधित छन्।
महल जटिल देखि दस किलोमिटर स्थित छ मुख्य बौद्ध मन्दिरमा, अतिथि शायद जापान भ्रमण गर्नुभएको थियो। भव्य मन्दिर Kodzan-जी (Toganosan Kosan-Ji), एक बाक्लो जंगल, प्रशंसा को एक भावना घेरिएको। टोक्यो र क्योटो राष्ट्रिय संग्रहालय मा स्थित ऐतिहासिक अवशेषहरूको धार्मिक जटिल।
प्रान्त को XIII शताब्दीमा बनाइएको थियो जो स्मारक, हेरविचार लाग्छ। शान्ति एक वातावरण सिर्जना जो, शान्त वातावरण, चर्च मा पुरा दिन खर्च गर्न चाहन्छ भन्ने तथ्यलाई योगदान पुग्छ।
Fallen सैनिकहरु को सम्मान मा स्मारक
विशेष ध्यान स्मारक Riozen-Kannen द्वितीय विश्व युद्ध को लडाई मा हत्या सिपाहीहरूले सम्मानको सिर्जना योग्य हुनुहुन्छ। यो क्योटो मा 1955 मा खोलिएको थियो। प्रान्त, आकर्षण को सूची खसेको को स्मृति आदर, धार्मिक स्मारक सीमित छैन, र चार पटक एक दिन स्मारकको सेवाहरू आयोजित छ।
को संरचना को केन्द्र मा प्रकृति को काखमा बसेर बुद्ध एक हिउँ-सेतो मुर्ति छ। यसको खुट्टा मा सुविधाजनक सबै faiths उपासकहरू प्रार्थना र सैनिकहरु को heroism को स्मृति मा मैनबत्ती प्रकाश जो मन्दिर अवस्थित छ। यो पनि अज्ञात सैनिक समर्पित हल निर्माण गरे।
Sagano बांस Grove
क्योटो (प्रिफेक्चर) यसको अचम्मको प्रकृति लागि प्रसिद्ध छ। बांस वन, देश को पूर्व राजधानी को पश्चिम मा स्थित, हरियो रूखहरू हजारौं हुन्छन्, पनि slightest समीर सुखद सुमधुर ध्वनि को सास संग प्रकाशित गरिएको छ। अतिथिहरूको यो शान्ति सबैभन्दा शान्तिपूर्ण ठाउँमा विश्राम लागि सिर्जना मध्ये एक छ कि स्वीकार। क्योटो राष्ट्रीय प्रतीक सबैभन्दा सुन्दर रूपमा सूचीकृत जापान ठाँउहरु।
प्रशासनिक केन्द्र भ्रमण सबै पाहुनाहरूको सुखद छाप धेरै दिन हुनेछ। यो तपाईं पूर्णतया पुरानो समय आत्मा आनन्द उठाउन सक्छौं र एकता र आनन्द को एक संसारमा प्रवेश गर्न जहाँ एक अद्वितीय स्थान हो।
Khmelnitsky (शहर): फोटो, ठाँउहरु, मान्छे। शहर को इतिहास
Lappeenranta मा फिनल्याण्ड मा दिन यात्रा
केही पक्षहरू र तथ्य: बिरुवाहरु को सुरक्षा
बुनाई सुई रूमाल-हुड
घाउको अनुकरण - के यो हो? घाउको अनुकरणको चरण
क्लीनर Ariete स्टीम: ढाँचाहरू र प्रतिक्रियाहरू
ब्रसेल्स स्प्राउट्स कसरी खाना पकाउनु सिक्न
होटल छात्रहरुको होटल द िईद्भस होटल3* फुकेत फोटो र समीक्षा
आफ्नो हातमा एक स्नान लागि फन्ट कसरी बनाउने? कस्तो स्नान लागि फन्ट के?